Madaafiic Iyo Qarax Miino Oo Lagu Weeraray Ciidamada Mareykanka. – Bogga Calamada.com
Madaafiic Iyo Qarax Miino Oo Lagu Weeraray Ciidamada Mareykanka.
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah Wilaayada Qandahaar ee Konfurta dalkaasi ay ka dhaceen Labo weerar oo isugu jirta duqeyn iyo qarax miino kuwaasi oo khasaara culus lagu gaarsiiyay askarta Saliibiyiinta Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalkaasi.
Guutada Madaafiicda Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan waxey tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhiga ciidamada Kufaarta Mareykanka ay ka sameysteen gudaha garoonka diyaaradaha gobalka Qandahaar.
Madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha saldhiga waxeyna taasi sababtay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay askarta Saliibiyiinta Mareykanka ee ku sugan saldhigaasi.
Duqeynta kadib waxaa saldhiga kasoo baxay kolanyo gaadiid ah oo ay la socdaan ciidamada Mareykanka kuwaasi oo u jiheystay halka ay madaafiicda kasoo dhaceen balse intii ay wadada kusii jireen waxaa lala beegsaday qarax miino oo aad u xoogan.
Qoraalka kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu xaqiijiyay in qaraxaasi lagu burburiyay gaari Taangi ah sidoo kale guud ahaan qaraxaasi waxaa ku baqtiyay askartii Mareykanka ee la socotay gaarigaasi Taangiga ah.